endriny - 07/05/2018 14:46
Ny mpahay siansa kosa dia taty aoriana be vao nahafantatra ny secretn'ny fiforonan'ireny flocon de neige ireny[/url]
Mba marina hoe. Efa taty aoriana ny olona vao nahafantatra an'izany?
Aoka hazavaina aminao ry RBNIR, fa I Joba dia tany amin'ny tany hay no nonina ka zavatra tsy fahitany izany rano mivaingana izany, raha tsy tsindraindray fotsiny.
Fa ilay nonorsa be tany amin'ny tany avaratra aza efa an-tapitrisany taona no nahalala fa rehefa mangatsiaka ny andro dia afaka mitety ny rano izy,mifindrafindra amin'ireo nosy sy tany manodidina.
Ka aza dia miteniteny foana re e.
Ny olona tany Nepal efa an'arivo taonany maro no nahalala sy niaina an'io ranomandry io. Fa tsy hoe I Joba irery akory no nampahafantarin'Atra izany, izay vao nahalala ny olona.
Dia ahoana indray izany ilay ranomasina lasa maina Aralkum: Notrohan'ny anjely niala tao koa hoe ny ranomasina? Sa hoe nanam-pinoana be ry zareo Rosianina dia nahavita nandritra ranomasina?
RBNIR - 07/05/2018 15:13
Youtube eee.. Efa tsy ao @ ilay vohitra kely tsy mahalala afa-tsy ny 100 km à la ronde anie ianao ry RBNIR ee.. Efa tsy @ ilay hoe, i belazao @ tanana irery no tompon'ny fahalalana, ka izay lazainy rehetra "@ feo mahery" dia inoana tsisy questionnemà daholo.
Tsy mahalala afa-tsy ny 100 km à la ronde sy belazao
* nefa nahafantatra mialoha fa ireo fleuve amin'ny tany dia mivarina an-dranomasina daholo???
* nefa nahafantatra tsara ny fomba fiforonan'ny flocon de neige???
* nefa nanantsaina ny hanisy harofanina taloha lavitra an'ireo architecte????
* nefa dia efa nahafantatra mialoha mikasika ny trou noir (farihy afo) afaka mandevona galaxie iray????
rhaj0 - 07/05/2018 16:35
RBNIR Handatsa Aho..
esy e... hay ve ny "zanak'Andmntra" ka mpandatsa ee.. Ts'haiko aloha hoe, soatoavin'iza no "mandatsa" ny lavo sy ny resy ary ny mahantra sy ny voahendy na nodoran'ny rano mangotsaka beuh izany..
Oadray, kay i Andmntra mihintsy no mandatsa @ io Ohabolam-Baiboly io.
Bravo RBNIR manipika izany eto.. hay va re.. izaho indray ve hi-contredire anao @ izany
RBNIR - 08/05/2018 07:33
tenin'Andriamanitra io rhajo a! miantefa amiko sy aminao , tsy izaho no handatsa anao fa IZY...
rhaj0 - 08/05/2018 12:18
okey dokey.. i Andrmntra mihintsy izany, hoz'i RBNIR, eny, i Andmntra no mandatsa ireo "mpanota" (tsy manaraka ny didiNY na toroheviNY...).
Ny olon'ny 2018 aza ho'a mahalala izany hoe "amour inconditionnel" @ zanany izany, ka na inona "otan-janany", dia "manohana" mandrakariva ee...
Raha ny marina anefa, raha ny fahitako azy, dia izao bainina nirediredy nanoratra ny Ohabolam-baiboly izao, no mpamosavy malemy be kirintona @ hadalany, ka "mandatsa" ny zanany ao @ fahavoazany ao, dia izany no akapokapony ho "tenin'Andmntra".
Dia miboloky mamerina tokoany koa ry RBNIR.
Tairo ao ho'a ry RBNIr fa izaho indray ve hi-contredire anao @ izany ee...
RBNIR - 08/05/2018 13:28
ny zavatra tsy fantatrao dia ity, maro ny olona ankehitriny any amin'ny helo any no manenina mafy hoe toy izay aho nino.....
RBNIR - 08/05/2018 13:30
Izao zavatra atao izao dia fialana nenina asesiky ny fitiavana sy ny fahafantarana ny marina,
Ary dia tena mihezaka miala nenina tokoa fa saingy atao ahoana moa rehefa sendran'ny manakipy maso e!
rhaj0 - 08/05/2018 13:46
RBNIR ny zavatra tsy fantatrao dia ity, maro ny olona ankehitriny any amin'ny helo any no manenina mafy hoe toy izay aho nino.....
Esy e ry RBNIR.. efa "niresaka" t@ "olona ankehitriny any amin'ny helo " izany i RBNIR io, ary nobitsihin-dreo hoe, "toa izay aho nino" an...
Mahery anie (ny imazination) RBNIR ee... Sa i Hrnrn no namahana anao resaka toa izany?
Dia toatoa ny ahoana hoe ny ao, rehefa "miresaka" ao ihany nareo ry RBNIR?
RBNIR - 08/05/2018 13:59
Vakio tsara fa nenina no mahazo ny olona lasa any ary raha azony natao dia.....
Ary ny tena loza dia ity, mbola lazain'i Abrahama ihany izy hoe "mon enfant", miroconnaitre tsara ny fahadisoany io olona io saingy efa tara loatra e!!!!
Ny mba tsy hahatongavan'izany amin'ny olona no anton'izao fitoriana izao rhajo!
endriny - 08/05/2018 14:29
Koa angaha moa Mandatsa fotsiny fa sady Mandringana no Mampahory Mandrakizay any amin'ny Helo, nohon'ny fitiavana tsy misy fetrany ho an-dry RBNIR daholo izany.
Aza mba tsy tiany ihany hoy aho, Marina e!
RBNIR - 08/05/2018 17:28
Handatsa! fa tsy mandatsa! raha mbola ao aminao ny famindrampony araraoty, sao dia ho tara loatra ka hanenina....
rhaj0 - 08/05/2018 17:55
ILery "mpandahatra ny zava-drehetra" izany Handatsa "any aoriana any".. hozy RBNIR. Certifié.
F'angaha tsy Izy ihany no "nandahatra" ilay izy ho @ izany ry RBNIR, vao eo vao handatsa handatsa eo??
Sa TSY "mpandahatra ny zava-drehetra" akoriny kay ny anao ry RBNIR, ary dia io vasoka be io fa tsy mahavita azy kay, ary dia ny olona no ho latsalatsaina any aoriana any?
Ka dia Iza no adala, izay hihaino izay latsalatsa any, sa ny mpandatsalatsa???
RBNIR - 09/05/2018 16:28
rhaj0 - 09/05/2018 17:02
hi hi hi... hoe i RBNIR lasa TSY MINO ihany @ farany ??
cool.. fa dia etsy tantanako razandry, fa mety sarotsarotra ny fi(s)ainana ao..
sahala t@ ireny lasa TSY NINO père noel ireny ihany ee...
RBNIR - 09/05/2018 17:36
Ianao no ambarako hoe tsy mino (matoa manao teny feno faniratsirana)
rhaj0 - 09/05/2018 18:45
k'Izy izany mandatsalatsa ny resy sy ny ory, ny mahantra sy ny malemy, izay voajonon'izao Devoly izao HONO.. nefa Izy ihany t@ io no "nandahatra" ny zava-drehetra.
Dia izaho mamerina sy manamafy ny taterin-dRBNIR indray no lazain-dry RBNIR fa maniratsira.
Sa tsy marina indray izany?
Dia efa impirimpiry koa re ry RBNIR aho no nilaza teto fa hoe Atheista aho...
Ny inona azany n'enareo no maninona ry RBNIR.. dia asa mihintsy ho'a ee...
endriny - 11/05/2018 16:43
Jesosy efa ela koa no nahalala ny angovo nokleary.
Rehefa maty Jesosy dia nidina tany amin'ny fiainan-tsy hita, nangorona angovo nokleary.
Dia ireo izany no nampiasainy niakarana any an-danitra.
Tena mahay Jesosy, fa miaky ny tenako
rhaj0 - 11/05/2018 18:11
Ka i Jesosy ao an-danitra ao azany, toa mitsikaroka ihany ny satelita, fa tena TSISY nahita Jesosy eny @ "Rahon'ny Lanitra" izany ee..
Jereo tsara fa na atoandro na alina dia TSISY mahita an'i JEsosy; nefany Izy @ io toa amina salaka fotsiny.. Izay ny ankanjony farany teny @ Hazo Fijaliana izy teo. Mahery Jesosy raha hiafina kah...
Sa indray... mbola any Dago izy, miondrika eo andoham-pandrianan-dry RBNIR sy ry Gasy1zay sy ny namany, izany no tsy ahitana Azy eo io?
RBNIR - 15/05/2018 07:03
Raha ny filazan'ny baiboly dia misy lanitra maro (galaxie maro)
Misy ohatra ny lanitra fahatelo : any no toerana misy ilay atao hoe paradisa araka ny baiboly
Ny toerana misy an'Andriamanitra indray kosa (izay tokony hoe toerana misy an'i Jesosy ankehitriny) dia voalaza fa any amin'izany lanitry ny lanitra izany...
« Ilay mitaingina ny lanitry ny lanitra izay hatry ny fahagola; Indro, mamoaka ny feony Izy, dia feo mahery. » (Salamo 68:33)
ka ny satelite ankehitriny ve mety hahatakatra an'izany lanitry ny lanitra izany rhajo??? ilay lanitra fahatelo (paradisa) aza mantsy otran'ny tsy takany akory koa!
rhaj0 - 15/05/2018 15:03
RBNIR Raha ny filazan'ny baiboly dia misy lanitra maro (galaxie maro)
Mba nojerenao ve ny orijinaly t@ teny anglisy na frantsay ry RBNIR? Novakianao tsara ny fitantaran'ny olona de l'an zero teo @ 100km è la ronde tao moyen-orient tao, ny fahatakarany izany tany sy ny lanitra, ary ny masoandro sy volana sy ny kintana izany?
1- ny lanitra = ciel, @ baiboly, dia io toile be mangamanga "ao ambony ao" io. Io toile io HONO no nisy efa h@ voanalohany mihitnsy, niaraka t@ latera.
Genesisy 1:1 1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
2- dia napetraky ny Atr'i genesisy t@ io toile io ny kintana sy ny masoandro sy volana, efa t@ andro faha-3. Ny "kintana" indray dia izay rehetra manjelajelatra "ao ambony ao", izay noforoniny koa taty aoriana, ary naparitany @ ilay toile io, na comètes io na planètes, na étoiles io na galaxies.
Genesisy 1:14 Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires... 16 Dieu fit les deux grands luminaires
3- dia ny rahona indray mitsingevaheva eny @ ilay toile koa: izay ilay "rahon'ny lanitra"
ka taiza ho aiza @ ireo ry RBNIR no hoe ciel = galaxie???
Abilabilao foana ho'a io Baiboly io ry RBNIR aa.. Disoy mihintsy ee... Ianao RBNIR mahay koakoa mantsy, fa efa mba mahay siansa HONO ianao, hoz'enao. (RBNIR manamarina RBNIR koa io)
hi hi hi.. Izaho indray ve hanakana anao @ izany ry RBNIR